Gabdho Soomaali ah oo lagu la’yahay dalka Cyprus - Caasimada Online
Home Warar Gabdho Soomaali ah oo lagu la’yahay dalka Cyprus
Gabdho Soomaali ah oo lagu la’yahay dalka Cyprus
Nairobi (Caasimada Online) – Hay’adda Qaramada Midoobey u qaabilsan Qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in saddex Gabdhood oo Soomaali ah lagu la’yahay Dalka Cyprus.
Xafiiska UNHCR ee Cyprus, ayaa baahiyay xogtan waxaana xafiisku uu sheegay in Gabdhahaas la waayay hal Todobaad ka hor.
UNHCR ma sheegin magacyada iyo xogta Gabdhaha Soomaalida ah ee lagu la’yahay dalkaasi kuwaas oo xeradii ay ku jireen laga waayay.
Hay’addu waxaa ay sheegtay in ay u baahantahay baadgoob dhameystiran,waxaa kale oo ay soo jeedisay in wax laga qabto baahiyaha dadka qaxootiga ah eek u jira Xeryaha Dalka Cyprus, kuwaas oo aan heli Karin shaqo iyo dhaq dhaqaaq kale.
Dadka aan qaan gaarin eek u jira xeryaha ku yaalla Dalka Cyprus ayaa loo oggolyahay in ay halkaas degganaadaan inta ay ka gaarayaan da’da 18 jir,waxaana kaddib qofkasta laga doonayaa in uu banneeyo halka uu ku noolyahay noloshiisana maareeyo.